Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ku -xigeenka cusub ee Iibka ayaa ku dhawaaqay iN2L
iN2L, bixiyaha ugu horreeya ee xallinta ka -qaybgalka dhijitaalka ah ee shaqsiyeed ee waayeelka, wuxuu ku faanaa inuu ku dhawaaqo ku -darka Tim Jones oo ah ku -xigeenka cusub ee Iibka. Doorkiisa, Jones wuxuu u wargalin doonaa Lisa Taylor, Maamulaha iN2L, si uu u kaxeeyo istiraatiijiyadda iibka ee ku wajahan kobcinta ururka wuxuuna gacan ka geysan doonaa gudbinta soo jeedinta qiimaha muddada fog suuqa weyn ee waayeelka.
"Waan ku faraxsanahay inaan Tim ku soo dhaweyno kooxda markaan sii wadno howsheenna si aan u hagaajino khibradda gabowga," ayuu yiri Taylor. “Anaga oo ah hogaamiyaha suuqa ee xalka kaqeybgalka nolosha waayeelka, waxaan u baahanahay hogaamiye iibsi firfircoon oo aragti leh sida Tim si uu noogu bilaabo wajiga xiga ee kobaca. Khibradiisa qotada dheer ee ku shaqaynta hababka iibka istaraatiijiyadeed waxay qiimo weyn ugu yeelan doontaa iN2L. ”
Tim wuxuu u keenaa iN20L waayo -aragnimo ka badan 2 sano oo ku saabsan iibinta teknolojiyadda daryeelka caafimaadka. Istaraatiijiyaddiisa wax -iibinta ee baaxadda leh waxay diiradda saareysaa sidii kor loogu qaadi lahaa koboca ganacsiga cusub ee qarxa, iyada oo la horumarinayo maareynta xisaabta firfircoon iyo barnaamijyada haynta macmiilka. Dhawaanahan, maadaama uu ahaa ku-xigeenka iibka meheradda ee Relias, Tim wuxuu kormeeray qorsheynta iyo istiraatiijiyadda horumarinta ganacsiga muddada-dheer.
"Qayb ahaan waxaa sabab u ah masiibada, qayb ahaan waxaa sabab u ah is -beddelka dareenka, suuqa waayeelka wuxuu ku jiraa xilli cajiib ah oo hal -abuurnimo iyo qulqul leh," ayuu yiri Jones. “Waxaa jira awood aad u badan oo koritaan ah-gaar ahaan sida ay waddo sida xallinta ka-qaybgalka dhijitaalka ahi u kobcin karto heerar badan oo isku-xirnaan, qanacsanaan, iyo fayoobaan ka mid ah dadka deggan bulshada. Sharaf bay ii tahay in aan gacan ka geysto kobcinta iN2L sida ay u abuurayaan habab cusub oo lagu kobcinayo cilaaqaad macno leh iyo dhammaystirka shaqsiyeed ee ka dhex jira dadkeena waayeelka ah. ”
Iyada oo xoogga la saarayo abuurista qiimaha dhabta ah, falsafadda iibka ee Jones waxay ku qotontaa bixinta fulinta joogtada ah, habsocodka, iyo hagaajinta hawlgelinta. Qaab -dhismeedkiisu wuxuu ku salaysan yahay maal -gelinta xiriiro shaqsiyeed oo xooggan, gaar ahaan inta u dhexeysa macmiilka xiriirka, guulaha macaamilka, iyo iibinta.
“Tim wuxuu sare u qaadaa heerka sare. Awooddiisu waxay ku jirtaa kor u qaadista kooxdiisa gaar ahaan heerarka sare ee guusha, ”ayuu yiri Taylor. "Waxaan aad u xiiseyneynaa inaan aragno sida xirfadihiisa hoggaamineed ee gaarka ah ay kor ugu qaadeyso awoodda aan u leenahay inaan gaarsiinno heerar cusub oo khibrad macmiil ah."